November 2012 ~ SPECIAL TRIP
Special Trip မှ ဗုဒ္ဓဂယာ ဘုရားဖူး ခရီးစဉ် ထွက်ခွာမည့် ရက်များမှာ
သင်နှင့်အတူ စိတ်ချမ်းသာစွာ ကုသိုလ် ယူချင်တာ Special Trip ပါSpecial Trip ၏ ဗုဒ္ဓဂယာ ဘုရားဖူး ခရီးစဉ်များအား လစဉ်ပုံမှန် ထွက်ခွာ နေကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါသည်။ Special Trip နှင့်အတူ ခရီးစဉ် လိုက်ပါခဲ့ ကြသော ဘုရားဖူး သူတော်စဉ် များအားလဲ အထူး ကျေးဇူးတင် ရှိကြောင်းနှင့် လစဉ် ထွက်ခွာမည့် ခရီးစဉ်များအား ကြိုတင်၍ စာရင်း ပေးသွင်းနိုင်ပါပြီ။ (၁၄) ညအိပ် (၁၅) ရက်ခရီးစဉ် ၊ (၁၁) ညအိပ် (၁၂) ရက် ခရီးစဉ် ၊ (၇) ညအိပ် (၈) ရက် ခရီးစဉ် များအား အကောင်းဆုံး ၀န်ဆောင်မှု အသက်သာဆုံး ဈေးနှုန်း ဖြင့်ပို့ ဆောင်ပေး နေပါပြီ လူကြီးမင်းတို့သိလိုသော အသေးစိတ် ခရီးစဉ်များအား Special Trip Website ပါလိပ်စာ နှင့် ဖုန်းနံပါတ်များအား စုံးစမ်းမေးမြန်း နိုင်ပါသည်။ Special Trip မှ ဗုဒ္ဓဂယာ ဘုရားဖူး ခရီးစဉ် ထွက်ခွာမည့် ရက်များမှာအဖွဲ့(၄) ၂၁ ၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၂အဖွဲ့(၅) ၁၆ ၊ ၀၁ ၊ ၂၀၁၃အဖွဲ့(၆) ၀၆ ၊ ၀၂ ၊ ၂၀၁၃အဖွဲ့(၇) ၂၃ ၊ ၀၂ ၊ ၂၀၁၃အဖွဲ့(၈) ၁၃ ၊ ၀၃ ၊ ၂၀၁၃အဖွဲ့(၉) ၂၇ ၊ ၀၃ ၊ ၂၀၁၃အဖွဲ့(၁၀) ၁၀ ၊ ၀၄ ၊ ၂၀၁၃အထက်ဖေါ်ပြပါ ခရီးစဉ် များတွင် လူကြီးမင်းများ ထွက်ခွာလိုသော ခရီးစဉ်အား မိသားစု အဖွဲ့ လိုက်သော် လည်းကောင်း ကုမ္ဓ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပဏီ အသင်းအဖွဲ့ များအတွက် သော်လည်းကောင်း သီးသန့်စီစဉ်ပေးပါသည်။ ခရီးစဉ်အဖွဲ့တစ်ခုတွင် (၃၂) ဦးသာ ထွက်ခွာ မည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်နှင့်အတူ စိတ်ချမ်းသာစွာ ကုသိုလ်ယူချင်တာ Special Trip ပါ
Special Trip အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ခရီးသွား (ရွှေဇာမဏီ) ဗုဒ္ဓ္ဓဂယာ ဘုရားဖူးအဖွဲ့ မှ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဆက်သွယ်လာသော လူကြီးမင်းများအား ကျေးဇူးတုန့် ပြန်သောအားဖြင့် အထူးခရီးစဉ် ၊ အသက်သာဆုံး ဈေးနှုန်း နှင့် မေတ္တာလက်ဆောင်များ အားပေးနေပါပြီ။ခရီးစဉ်ဝန်ဆောင်မှု စိတ်အချရဆုံးနှင့် စိတ်ချမ်းသာစွာ ကုသိုလ်ယူဖူး မျှော်နိုင်ရန် ရာခိုင်နှုန်း အပြည့်တာဝန် ယူပါသည်။
>>> ခရီးစဉ် တစ်ခုတွင် လူဦးရေ ကန့် သတ်ထားပြီး တစ်ဖွဲ့ လျှင် ၃၂ ဦးသာ ထွက်ခွာမှာ ဖြစ်ပါသည်။
>>> ရက်တိုတို နှင့် သွားရောက် ဖူးမျှော်ချင်သူ များအတွက်(၇)ညအိပ်(၈)ရက်ခရီးစဉ်ကို မိသားစု သီးသန့် ကားများဖြင့်ပို့ ဆောင်ပေးပါသည်။
>>> ဘုရားဌာနများအား အချိန်ယူဖူးမျှော်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး စိတ်ချမ်းမြေ့ စွာကုသိုလ် ယူချင်သူများအတွက် (၁၁) ညအိပ် (၁၂) ရက်ခရီးစဉ် အား (ဖွား၊ပွင့်၊ဟော၊စံ) ဝေသာလီ နလန္ဒာ ၊ ရာဇဂြိုလ်တို့ ကိုသွားရောက် ဖူးမျှော်နိုင်ရန် စီစဉ်ပေးပါသည်။
>>> ဘုရားဌာနစုံ ၊ဗဟုသုတစုံ အိန္ဒိယ နိုင်ငံ၏ မြို့တော်ကြီး နယူးဒေလီ နှင့်အတူ ကမ္ဘာ့ အံဖွယ် တပ်ခ်ျမဟာ အပါအ၀င် (၁၄) ညအိပ် (၁၅) ရက်ခရီး စဉ်အားအဆင်မြင့် လေအိတ် ကားကြီးများဖြင့် ပို့ ဆောင်ပေးနေပါပြီ။
>>> ရန်ကုန်မြို့ တွင်းအိမ်အရောက် ၀န်ဆောင်မှု ပေးခြင်း။
>>> နယ်မှ ခရီးသည် များကို အဆင့်မြင့် တည်းခိုခန်း များတွင် အခမဲ့ တည်းခိုနိုင် ရန်စီစဉ် ပေးခြင်း။
>>> သက်ကြီးရွယ်အိုဖြစ်ပါ ကသီးသန့် ခုံပေး၍ လိုအပ်လျှင် ဘီးတပ်ကုလားထိုင် စီစဉ်ပေးခြင်း၊သီးသန့် အကူထားပေးခြင်း။
>>> ခရီးဆောင်အိတ်၊ ဘေးလွယ်အိတ်၊ ပိုက်ဆံအိတ်၊ ဦးထုပ်၊ ယောဂီပုဝါ၊ ရင်ထိုး၊ သော့ချိတ်၊ မျက်နှာသုတ်ပ၀ါ ခရီးစဉ် လမ်းညွန်ဘုရားစာအုပ် နှင့် DVD မှတ်တမ်း ခွေများ မေတ္တာ လက်ဆောင်ပေးခြင်း။
>>> ခရီးသည်(၁၀)ဦးပြည့်လျှင်(၁)ဦးအခမဲ့လိုက်ပါ ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
>>> SPECIAL TRIP ၏ အထူးအစီ အစဉ်အရ သံဃာတော်နှင့်သီလရှင် များအား မည်သည့် ခရီးစဉ် မဆိုတစ်ဦး လျှင်ကျပ်(၅သောင်း)တိတိ လျှော့ပေးခြင်း။
>>> SPECIAL TRIP မှခရီးသည်များ မဇ္ဈိမဒေသတွင်ကုသိုလ်ယူဖူးမျှော် နိုင်ရန် ပြည်ပရောက်မြန်မာ လူမျိုးများ မိမိ၏ မိသားစုများနှင့် တွေ့ ဆုံဖူးမျှော် ကုသိုလ်ယူ နိုင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံး ၀န်ဆောင်မှုဖြင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပတွင် ဆောင်ရွက် ပေးပါသည်။ မိမိတို့ ကြိုက်နှစ်သက် ရာရက်ကို ရွေးချယ်၍ SPECIAL TRIP နှင့်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ သင်၏ ခရီးစဉ် ကိုစိတ် ချမ်းသာမှု အပြည့်ဝဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံး ၀န်ဆောင်မှု ပေး သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
နှုန်းထားများ- (၁၇)ညအိပ်(၁၈)ရက်ခရီး နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှိပြီးသူများ(၉သိန်း)၊ မရှိသူများ(၉.၅သိန်း)
-(၁၄)ညအိပ်(၁၅)ရက်ခရီး နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှိပြီးသူများ(၈.၅သိန်း)၊ မရှိသူများ(၉သိန်း) -(၁၁)ညအိပ်(၁၂)ရက်ခရီး နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှိပြီးသူများ(၈သိန်း)၊ မရှိသူများ(၈.၅သိန်း)
-(၇)ညအိပ်(၈)ရက်ခရီး နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှိပြီးသူများ(၆.၅သိန်း)၊ မရှိသူများ(၇သိန်း)
လေယာဉ်လက်မှတ်၊လေဆိပ်ဝင်ကြေး၊D Form၊ဗီဇာကြေး၊အာမခံကြေး၊စားစရိတ်၊ဟိုတယ်ခ၊ကားခ၊ ၀င်ကြေးများ အပြီးအစီး ပါဝင်ပြီး၊ မည်သည့် အကြောင်းနှင့်မျှ ထပ်မံကောက်ယူခြင်း ပြုလုပ်မည် မဟုတ် ကြောင်း အပြည့် အ၀ အာမခံပါသည်။ ခရီးသည် အနေဖြင့်လှူဒါန်း/ဈေးဝယ်ရန်သာ ကုန်ကျပါမည်။
Special Trip အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ခရီးသွားမှ ဘန်ကောက်သို့ New Year အထူးခရီးစဉ်
Special Trip မှ ဘန်ကောက် ခရီးစဉ်အား ဒီဇင်ဘာ(၂၈)ရက်နေ့ တွင် အထူး ခရီးစဉ် ထွက်ခွါမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဘန်ကောက်၊ ပတ္တရား၊ အယုဒ္ဓယ သို့ (၄)ညအိပ် (၅)ရက် ခရီးစဉ် ထွက်ခွာမှာ ဖြစ်ပြီး ဘန်ကောက်မြို့ ရှိ Three Star အဆင့်ရှိ ဟိုတယ်ကြီး များတွင်သာ တည်းခိုမှာ ဖြစ်ပါသည်။ နေ့ လည်စာ၊ ညစာများကို နာမည်ကြီး စားသောက်ဆိုင် ကြီးများတွင် ဘူဖေး သုံးဆောင် ရမည် ဖြစ် ပါသည်။ လူကြီးမင်းများ စိတ်တိုင်းကျ ဈေးဝယ် ထွက်နိုင်ရန် နှင့် နေရာစုံ လည်ပတ်နိုင်ရန် အတွက် Special Trip ၏ အကောင်းဆုံး ၀န်ဆောင်မှုနှင့် အတူပို့ ဆောင်ပေး နေပါသည်။ ခရီးစဉ် အသေးစိတ်အား လူကိုယ်တိုင် သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ E-mail နှင့် သော်လည်းကောင်း စုံစမ်းနိုင်ပါ သည်။ ခရီးစဉ်တွင် လူဦးရေ ကန့် သတ်ထားပါသဖြင့် ကြိုတင် စာရင်း ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
ခရီးစဉ်တွင် ဗီဇာကြေး၊ လေယာဉ်လက်မှတ်၊ ဟိုတယ်၊ စားစရိတ်၊ ကား၊ ဧည့်လမ်းညွှန်နှင့် ၀င်ကြေးများ အပြီးအစီး တစ်ဦးလျှင်(၅.၃)သိန်းကျပ်ဖြင့် ပို့ ဆောင်ပေးနေပါသည်။
Special Trip (ရွှေဇာမဏီ)မှ ဗုဒ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓဂါယာဘုရားဖူး အထူးအစီအစဉ်
Special Trip အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ခရီးသွား ဗုဒ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓဂါယာဘုရားဖူးအဖွဲ့ 
ဗုဒ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓသာသနာ ရှည်ကြာတည်ဖို့ မြေဂယာဆီသို့ `ရွှေဇာမဏီ’ နှင့် သွားကြပါစို.။ >>> (၁၄)ညအိပ် (၁၅) ရက်ခရီးစဉ် - သံဝေဇနိယ လေးဌာန၊ အ၀ိဇဟိတ လေးဌာန၊
နယူးဒေလီ၊ တပ်ခ်ျမဟာ ( ၉ သိန်း )။
>>> (၁၁)ညအိပ် (၁၂)ရက်ခရီးစဉ် - (ဖွား+ပွင့်+ဟော+စံ)ဝေသာလီ၊ ရာဇဂြိုလ်၊ နာလန္ဒာ (၈.၅ သိန်း)။
>>> (၇) ညအိပ် (၈)ရက်ခရီးစဉ် (၇ သိန်း)။
နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မရှိသေးသူများ တစ်လ ကြိုတင်၍ စာရင်း ပေးသွင်း ရပါမည်။
နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ရှိသူများကို ကျပ်(၅)သောင်း လျှော့ပေးပါမည်။
သံဃာ နှင့် သီလရှင်များအား မည်သည့်ခရီးစဉ်မဆို ကျပ်(၅)သောင်းလျှော့၍ ကုသိုလ်ယူပါမည်။
ထွက်ခွာမည့်ရက်များ (၂၆.၁၁.၂၀၁၂) (၂၇.၁၁.၂၀၁၂) (၂၁.၁၂.၂၀၁၂) (၁၆.၁.၂၀၁၃)
Special Trip (ရွှေဇာမဏီ) အထူးအစီအစဉ်အရ မည်သည့်ခရီးစဉ်တွင်မဆို (၁၀)ဦးစုစည်းလာပါက (၁)ဦးအခမဲ့ လိုက်ပါခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်ပနိုင်ငံရှိ ဘုရားဖူး သူတော်စဉ်များအတွက် အထူးအစီအစဉ်ရ special trip နှင့်အတူ ကုသိုလ် ယူလိုပါက (၁၄) ညအိပ် (၁၅) ရက် ခရီးစဉ် ကတ္လကတ္တား အပါဝင် ဘုရားဌာနစုံအား USD $400 (စရိတ်ငြိမ်း) မိမိ၏ခရီးစဉ်အား ၀န်ဆောင်မှု အကောင်းဆုံးနှင့် စိတ်ချမ်းသာမှု အပြည့်ဝဆုံး ကုသိုလ်ယူလိုပါက special trip နှင့် ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
>>> ခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် သိလိုပါက ဖုန်းနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
ရန်ကုန်ရုံးချုပ် ၊ အမှတ်(၁၁) ချမ်းသာလမ်း၊ ကျွန်းတော တောင်ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်း
မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။ ဖုန်း- ၀၁-၅၂၇၂၅၀ ၊
၀၉၆၄၁၄၀၂၂ ၊ ၀၉၄၂၀၀၅၆၆၈၄ ၊ ၀၉၄၃၂၀၉၆၃၆
မန္တလေးရုံးခွဲ - အမှတ်(၁၅) အောင်ဇမ္ဗူကျော် တိုက်တန်း ၊ ၈၇လမ်း ၊၃၉-၄၁ ကြား ၊ မန္တလေးမြို့ ။
ဖုန်း - ၀၉၉၁၀၁၃၇၂၆ ၊ ၀၉၆၈၁၂၄၃၄ ၊ ၀၉၄၀၀၀၁၆၀၀၀
မြစ်ကြီးနားရုံးခွဲ - TOP တေး သံသွင်း ၊ အမှတ် (၂၂၀)ယုဇန ရပ်ကွက် ၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း မကြီး၊ ပန်းခြံရှေ. မြစ်ကြီးနားမြို.။ ဖုန်း - ၀၇၄၂၉၂၈၂ ၊ ၀၉၆၄၀၀၄၉၃
ဖားကန့် ရုံးခွဲ - အောင်ချမ်းသာ အဆင့်မြင့် တည်းခိုခန်းမြို့ မရပ်ကွက် ဖားကန့် မြို့ ။ ဖုန်း - ၀၉၆၄၁၃၁၉၄
SPECIAL TRIP စင်္ကာပူခရီးစဉ် SPECIAL TRIP အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာခရီးသွားမှ အထူးဝန်ဆောင်မှုများ ၁။ ရန်ကုန်မြို့ တွင်း အိမ်အရောက် ၀န်ဆောင် မှုပေးခြင်း။ ၂။ နယ်မှ ခရီးသည်များ...
ဘန်ကောက် - စကာင်္ပူ - မလေးရှား (၈ ညအိပ် ၉ ရက်)
ဘန်ကောက် - စကာင်္ပူ - မလေးရှား (၈ ညအိပ် ၉ ရက်) Day 1 - ရန်ကုန် - ဘန်ကောက် ရန်ကုန်မြို့ မှ ဘန်ကောက်မြို့ သို့ ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပြီး ၎င်းမှ တ...
သင်နှင့်အတူ စိတ်ချမ်းသာစွာ ကုသိုလ် ယူချင်တာ Special Trip ပါ Special Trip ၏ ဗုဒ္ဓဂယာ ဘုရားဖူး ခရီးစဉ်များအား လစဉ်ပုံမှန် ထွက်ခွာ နေကြောင်း သ...
SPECIAL TRIP ဗုဒ္ဓဂယာ ခရီးစဉ် SPECIAL TRIP အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာခရီးသွားမှ အထူးဝန်ဆောင်မှုများ ၁။ ရန်ကုန်မြို့ တွင်း အိမ်အရောက် ၀န်ဆောင် မှုပေးခြင်း။ ၂။ နယ်မှ ခရီးသည်များ...
တောင်ကြီး - အင်းလေး - ပင်းတယ - ကလော (၄ ည ၅ ရက်)
Taunggyi - Inle - Pindaya - Kalaw (4N5D) - Next One တောင်ကြီး - အင်းလေး - ပင်းတယ - ကလော (၄ ည ၅ ရက်) ITINERARIES Day 21: ရန်ကုန် -ေ...
Special Trip ထိုင်း ခရီးစဉ်
Special Trip International Travel & Tours Trip: Bangkok – Pttaya – Ayutthaya (6days5night) Day 1 Bangko...
ပုဂံ - ပုပ္ပါး - ပခုက္ကူ- ပြည် ( ၄ ည ၅ ရက်) BGN- Pukko - Pyi ပုဂံ - ပုပ္ပါး - ပခုက္ကူ- ပြည် ( ၄ ည ၅ ရက်) ITINERARIES Day 1: ရန်ကုန် - ပုဂံ Ovt On the way Day ...
ဘန်ကောက် - အယုဒ္ဓယ - ပတ္တရား (၄ညအိပ်-၅ရက်ခရီး)
Special Trip International Travel and Tours ဘန်ကောက် - အယုဒ္ဓယ - ပတ္တရား (၄ညအိပ်-၅ရက်ခရီး) Day 1 - ရန်ကုန် - ဘန်ကောက် ရန်ကုန်မြို့ မှဘန...
Special Trip မှ ဘန်ကောက် ခရီးစဉ်အား ဒီဇင်ဘာ(၂၈)ရက်နေ့ တွင် အထူး ခရီးစဉ် ထွက်ခွါမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဘန်ကောက်၊ ပတ္တရား၊ အယုဒ္ဓယ သို့ (၄)ညအိပ် (၅)...
Special Trip အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ခရီးသွားမှ ၂၀၁၃ခုနှစ် မတ်လနှင့် ဧပြီလအတွက် ဗုဒ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓဂယာသို့ အထူးခရီးစဉ်
Special Trip အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ခရီးသွားမှ ၂၀၁၃ခုနှစ် မတ်လနှင့် ဧပြီလအတွက် ဗုဒ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓဂယာသို့ အထူးခရီးစဉ် ၂၂-၃-၂၀၁၃ မှ ၅-၄-၂၀၁၃ ထိ ၁၄ည အိပ် ၁၅ရက...
Special Trip မှ ဗုဒ္ဓဂယာ ဘုရားဖူး ခရီးစဉ် ထွက်ခွာမည...
သင်နှင့်အတူ စိတ်ချမ်းသာစွာ ကုသိုလ်ယူချင်တာ Special...
Special Trip အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ခရီးသွားမှ ဘန်ကောက်သ...
Special Trip (ရွှေဇာမဏီ)မှ ဗုဒ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓဂါယာဘုရား...
Copyright © SPECIAL TRIP | Powered by Blogger
Design by Special Trip | Blogger Theme by Special Trip - Special TripSpecial Trip